Khasaaraha Qaraxii Muqdisho Oo Kordhay Iyo Idaacada Andalus Oo Baahisay Magacyada Saraakiil Lagu Dilay Qaraxaasi.
Monday February 04, 2019 - 17:53:25 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Idaacadda Islaamiga Andalus ee ku hadasha afka Xarakada Al-Shabaab ayaa sheegtay inuu kordhay khasaaraha dhimasho ee ka dhashay qarax xoogan oo maanta lagu beegsaday Saraakiil ka tirsan DF, iyagoo dhanka kalena baahiyey magacyada Saraakiil ay sheegee
Kadiye wuxu ka mid ahaa saraakiishii lagu dilay qaraxa
Idaacadda Islaamiga Andalus ee ku hadasha afka Xarakada Al-Shabaab ayaa sheegtay inuu kordhay khasaaraha dhimasho ee ka dhashay qarax xoogan oo maanta lagu beegsaday Saraakiil ka tirsan DF, iyagoo dhanka kalena baahiyey magacyada Saraakiil ay sheegeen in lagu dilay qaraxaasi.
Warbixin ay baahisay Idaacadda Andalus Ayaa U Qorneed Sidatan:-
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxay khasaaraha ka dhashay qarax aad u xoogan oo barqanimadii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya kaas oo lala eegtay goob ay ku sugnaayeen Saraakiil ka tirsan dowlada ridada oo isugu jira Military, Nabadsugid, iyo shaqaalaha maamulka ridada ee gobolka Banaadir.
Qaraxan oo ahaa mid loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa ayaa ka dhacay Goob lagu magacaabo ‘Baar Banaadir’ uu ku taalla agagaarka xarunta maamulka gobolka Banaadir, halkaas oo ay joogeen Saraakiil ka tirsan dowlada ridada.
Sarkaal ka tirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab oo la hadlay Idaacadda Andalus ayaa sheegay in qaraxa lala eegtay isku imaatin ay ku sugnaayeen xubno fara badan oo ka tirsan Murtadiinta islamarkaana uu halkaas ka dhashay khasaare xoogan isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Warar xog ogaal ah oo ay heshay Idaacadda Islaamiga Andalus ayaa tilmaamaya in qaraxaas lagu dilay ku dhawaad 20 Murtad, laguna dhaawacay tiro intaas ka badan, waxaana jira burbur xoogan oo soo gaaray gaadiid ay wateen saraakiisha Murtadiinta oo goobta yaallay.
Idaacadda Islaamiga Andalus ayaa heshay magacyada saraakiil iyo mas’uuliyiin ka tirsan kooxda ridada oo ku halaagsamay kuna dhaawacmay qaraxa maanta ka dhacay degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho.
Saraakiisha lagu dilay qaraxaas waxaa ka mid ah gaashaanle Sare Cabdi Nuur Axmad Kadiye oo ka tirsanaa saraakiisha Military-ga ee kooxda ridada. Murtadkan ayaa ka mid ahaa xubnihii ku sugnaa maqaayada uu qaraxu ka dhacay.
Sarkaal lagu magacaabo Cabdi Aadan Deeq oo ku magacdheer (Cabdi Cagweyn) ayaa sidoo kale ka mid ahaa saraakiisha lagu dhaawacay qaraxii maanta ka dhacay degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho.
Laba Sarkaal oo ka tirsan waxa loogu yeero hay’adda nabad sugida oo lagu kala magacaabo Muxiyidiin Macoow iyo Cabdullaahi Yare ayaa sidoo kale ka mid ahaa saraakiisha lagu dilay qaraxaasi.
Khasaaraha ugu badan ayaa soo gaaray xubno u shaqeynayey hay’adaha dowlada ridada iyo shaqaalaha maamulka gobolka Banaadir, kuwaas oo ka dhawaa halka uu qaraxu ka dhacay sida ay noo xaqiijiyeen saraakiisha Mujaahidiinta.
Maqaayada Baar-Banaadir ee qaraxan lagu beegsaday ayaa ka mid ah goobaha fara ku tiriska ah ee ay ku kulmaan saraakiisha iyo shaqaalaha dowlada ridada, waxaana ay leedahay koontaroolo lagu baaro dadka doonaya in ay gudaha u soo galaan balse Allaah fadligii Mujaahidiinta ayaa si fudud kaga dusay koontaroolada cadowga, islamarkaana gaaray goobaha uu gabaadka ka dhigtay.
Qaraxan wuxuu imaanayaa xilli todobaadkii hore sidan oo kale ay Mujaahidiintu u qarxiyeen goob lagu magacaabo Baar Itaaliya oo ku taalla meel u dhow xabsiga Godka Jilicoow, taas oo lagu dilay 7 sarkaal oo uu ku jiray taliyihii hore ee xabsiga.
Mujaahidiinta ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa isbuucyadii la soo dhaafay xoojiysay weerarada qorsheysan ee lagu beegsanayo bartilmaameedyada ku yaalla goobaha xasaasiga ah ee sida aadka ah loo ilaaliyo, waxaana muuqata in aysan Murtadiintu weli u suuragalin in ay ka hortagaan weerarada barakeysan ee geesiyada Islaamka.
XIGASHO: Idaacadda Islaamiga Andalus.